Nandefa fanambarana ny sampana mpamantatra ny toetry ny andro fa nitohy hatramin’ny maraina teo ny orambe amin’ny faritra maromaro. Tafiditra ao ny manodidina an’Antananarivo, Andilamena, ny faritra Atsimo Andrefana ary Mangoro. Nahazo fampitandremana miloko mena, manambara loza mihatra ireo toerana voalaza ireo. Samy niara-nahita ny rehetra fa mafimafy ny orana nirotsaka omaly teto an-dRenivohitra raha nanombana ny eny Ampandrianomby fa ho kelikely ihany ny refin’ny rotsak’orana nandrasana.
Dahalo roa lahy indray maty voatifitry ny zandary nandritra ny fisamborana azy ireo tany Antetezambato Tsaratanana, ny herinandro teo. Tratra tany amin’izy ireo ny basy Mas 36 iray niaraka tamin’ny bala efatra. Voalaza fa nifanena tamin’ny zandary izy roa lahy ka nitifitra avy hatrany. Raikitra ny fanenjehana sy ny fifampitifirana ka maty tsy tra-drano izy roa lahy.
Olona efatra tratran’ny zandary avy ao amin’ny borigadin’i Namakia izay avy nanafika mpivarotra enta-madinika. Niantso an-taribia ireo zandary ilay niharan’ny fanafihana ary nilaza fa misy jiolahy dimy manafika ny tokantranony. Basy AKM iray miaraka amin’ny bala 11 sy basy P.A iray vita gasy miaraka amin’ny bala roa tratra tany amin’izy ireo. Mbola nahitana fanamiana an’ny tafika Malagasy sy tenue de combat roa Kossovo tany amin’izy ireo. Mitohy ny famotorana ireto voarohirohy ireto.